Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Mbola hanao inona indray Rahajason?
Inty sy nday: Mbola hanao inona indray Rahajason?
Antenaina fa tsaroan’ny maro ny teny nataon’ity minisitra ny Fifandraisana ity tany Vangaindrano sy Farafangana, volana vitsy lasa izay. Notsindriany mivantana tamin’izay fa “ny haino aman-jerim-panjakana dia natao hitaterana ny vaovao momba ny asa vitan’ny fitondram-panjakana. Noho izany, tsy sehatra hanaovana ady lahy pôlitika na fifanasana vangy io ka tsy azo omena sehatra amin’ny Tvm sy Rvm ireny mpanao pôlitika ireny fa misy haino aman-jery tsy miankina betsaka eto, ka any izy ireny no tokony haneho ny heviny”.
Isan’ny nanao lahatsoratra momba an’io tenin’ny minisitra Harry Laurent Rahajason io teto izahay satria tsy rariny ary tsy ara-dalàna.
Tsy lovan’ny minisitra Rahajason Harry Laurent avy amin’ny rainy na ny reniny ny haino aman-jerim-panjakana ka izy no handidy sy hanapaka ary hanao jadona sy didiko fe lehibe amin’io. Misy lalàna mamaritra ny satan’ny haino aman-jerim-panjakana sy ny asany fa tsy ny kabarin’ny mpitondra tsy mahazaka demokrasia no lalàna velona eto. Noho izany, aoka hajaina izany lalàna mamaritra ny satan’ny haino aman-jerim-panjakana izany.
Raha rariny ny hevitra nambaran’ny minisitra Rahajason Harry Laurent dia tokony hovainy aloha ny lalàna mamaritra ny satan’ireo haino aman-jerim-panjakana ireo dia tsy miady hevitra izahay.
Fa ny isan’ny nanaitra tamin’ity herinandro ity dia ny akon’ny fivoriambe tsy ara-potoanan’ny “Komitin’ny Fampihavanana Malagasy” (Cfm). Ny fehin-kevitra nivoaka tao dia nisy teboka iray niresahan-dry zareo ny fomba fampiasana ny haino aman-jerim-panjakana. Ny “Rnm” sy “Tvm” io.
Tafiditra ao anatin’ny asan’ny Komitin’ny Fampihavanana Malagasy mantsy ny fanalefahana ny fifandroritana pôlitika eto. Tokony hikatsaka mandrakariva ny fitoniana ny tsirairay. Tafiditra ao anatin’ny fanoitran’ny fampitoniana ny fifanandrinana pôlitika eto ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra satria zo nomen’ny lalàna ny isam-batan’olona izany. Ny dikan’izay koa dia voafatotra andraikitra amin’izay zo isitrahany izay ny tsirairay, indrindra fa raha mandika ny lalàna eo ampanehoana hevitra.
Iray amin’ny fitaovana, izay fitaovam-panjakana, an’ny vahoaka izany, natao hanehoan’ny sokajin’olona isanisany ny heviny ny haino aman-jerim-panjakana. Lojikan’izay rafi-pisainana izay ny hevitra iray navoitran’ny Komitin’ny Fampihavanana Malagasy ny amin’ny fitakiana ny hanokafana ny haino aman-jerim-panjakana mba ho azon’ny ankolafin-kery isan-tokony anehoana hevitra. Tsy voatery ho ny ankolafy pôlitika fa hatramin’ny firaisamonim-pirenena sy ny mpisehatra amin’ny tontolo ara-toekarena na ny mpisehatra ara-tsosialy, na ny mpiaro ny harem-pirenena sy harena voajanahary, sy ny hafa e!
Dia mbola hanana fahasahiana hampihatra ny didiko fe lehibe amin’izany hevitra rariny sy ara-dalàna navoitran’ny Komitin’ny Fampihavanana Malagasy izany ihany ve ny minisitra Rahajason Harry Laurent na i Rolly Mercia?
Raha ny lojika pôlitika izao dia ny mametra-pialana no mahamendrika an’io Minisitra io satria efa rafi-panjakana mijoro eto amin’ny tany sy ny firenena mihitsy no manohitra ny hevitra tian’Ingahy Minisitra hampanjakaina eto. Sa miombon-kevitra amin’Ingahy Minisitra Rahajason Harry Laurent ny Filohampirenena sy ny Praiminisitra momba ny haino aman-jerim-panjakana? Raha tsy sahy manaisotra an-dRahajason Rolly Mercia amin’ny toerany izany Ingahy Rajaonarimampianina sy i Mahafaly Olivier Soloinandrasana dia isan’ny mpiombon-kevitra sy mety ho tompon-kevitra tamin’izay nambaran’i Rolly Mercia tany Atsimo Atsinanana mihitsy, ka mendrika azy ireo koa ny mametra-pialana fa mahamenatra sady mamotika firenena, ankoatry ny fanitsakitsahany ny zon’olombelona.